सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या ५ लाख नाघ्यो – Samacharpati Samacharpati सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या ५ लाख नाघ्यो – Samacharpati
पर्वत अस्पतालमा अक्सिजनसहितको शय्या थप
अक्सिजन उत्पादन, आपूर्ति र वितरण तत्काल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
वीरगञ्जमा २४ घण्टामा १३ संक्रमितको मृत्यु
निषेधाज्ञामा यसरी गर्नुहोस मानसिक स्वास्थ्यको स्याहार
गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ६ जना संक्रमित थपिए, हेर्नुहोस कुन जिल्लामा कति थपिए
उपत्यकाको निषेधाज्ञामा थप कडाई, अत्यावश्यक बाहेक सबै कार्यालय बन्द
आजको राशिफल : २०७८ साल बैशाख २९ गते बुधवार
आजको राशिफल : २०७८ साल बैशाख ३० गते बिहिबार
डीभी २०२२ को नतिजा सार्वजनिक
सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या ५ लाख नाघ्यो
सोमवार, माघ २६, २०७७
२६ माघ, काठमाडौं । नयाँ चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिनेको संख्या पाँच लाख नाघेको छ । देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिरहेका छन् । गत वर्ष चैतदेखि कोभिड–१९ का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो । झण्डै १० महिनासम्म अनुमतिपत्र बन्द भएर […]
भिटामिन ‘डी’को जथाभावी प्रयोग, पत्थरीदेखि मिर्गौला ड्यामेज गराउने चिकित्सकको चेतावनी
कब्जियतको समस्या हुनेले के के कुरा नखाने ?
नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा भासिएको सडक मर्मत सुरु
बुढानीलकण्ठमा देउवासँग ठाकुर र महतोको भेटवार्ता
स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशकाे प्रतिबद्धता
भारतमा अब ड्रोनबाट दूरदराजसम्म कोरोना खोप पुर्‍याइने
पर्वत : कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पर्वत अस्पतालमा २६ शय्या थप गरिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरपछि संक्रमित थपिँदै जाँदा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाइएको १० शय्याको आइसोलेसन वार्डले थेग्न नसक्ने भएपछि २६ शय्या थप गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले जानकारी दिए।
‘अस्पतालमा रहेको १० शय्याको क्षमताले बिरामी धान्न सकेन। प्यासेज र ओपिडीमा समेत राखेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। संक्रमणको अवस्था झनै फैलिँदो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘प्यासेज र ओपिडीमा गरेर शनिवार १६ जनालाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता पूरा गरेका छौँ। सोमबार थप २० शय्या निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन लागिरहेका छौँ।’ थप भएका प्रत्येक शय्यामा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था पनि भइरहेको छ।
संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति नभएकाले अहिलेको स्वास्थ्यकर्मीलाई नै परिचालन गरेर सकेसम्म अस्पताल आउने सबै संक्रमितलाई सेवा दिने प्रयास गरिएको पहाडीले बताए। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ढुण्डिराज पौडेलले अस्पतालले पूर्व तयारी स्वरूप शय्याको व्यवस्था गरे पनि लक्षण नदेखिएका र स्वास्थ्यमा समस्या नभएका बिरामीहरू अस्पतालमा गएर बस्न उचित नहुने बताए। सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई घरमा नै बढी सुसार र सुरक्षा हुने भएकाले उनीहरू अस्पतालमा आउँदा झनै जोखिम हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड महामारीबाट विरामी भएका नागरिकको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन लगायत अन्य उपकरणको तत्काल व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएका छन्।
विभिन्न अस्पतालका सञ्चालक, चिकित्सक, विज्ञ, अक्सिजन उत्पादक, वितरक, निजी क्षेत्र, मन्त्री र सरकारी निकायसँगको विशेष छलफल आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव जीवन रक्षाका लागि तीव्र रफ्तारमा काम गर्न निर्देशन दिए।
कोभिड(१९ को दोस्रो भेरियन्ट संक्रमणका सन्दर्भमा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमका विषयमा जानकारी दिंदै विभिन्न निकायले गर्नु पर्ने कामबारे निर्देशन दिएका थिए।
तत्कालको काम अक्सिजन आपूर्ति
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति, उत्पादन र वितरणमा लाग्न निर्देशन दिए। घरघरमा अक्सिजनको सिलिण्डिर राख्ने र अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुने गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक सचेतना आवश्यक रहेको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
‘सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाउने, कोभिड लाग्छ भनेर अक्सिजन घरमै लगेर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले अस्पतालको विरामीलाई पनि बचाउन सक्दैन र घरमा राखेको अक्सिजनले पनि काम गर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस कुरामा जनचेतना जगाउनु आवश्यक देखियो।’
सरकारले तत्काल गर्ने कामको रुपमा अहिले अक्सिजन आपूर्ति, उत्पादन र वितरणलाई लिएको उनको भनाई थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भने, ‘अक्सिजन खरिद र वितरणका लागि तत्काल के के गर्नुपर्छ गर्ने, निजी अस्पतालमा बढेको नाफाखोर प्रवृत्ति हटाउने, भेन्टिलेटर अपुग भए तत्काल मगाएर त्यसको पूर्ति गर्ने काम गर्नु पर्‍यो । मानवीय संकटको बेला ३५ दिने सूचना पर्खेर बसे नागरिकको ज्यान जान्छ।’
विरामीलाई खोजेको औषधि र अन्य उपचार सामग्री नपाएर मर्छु भन्ने मनोविज्ञानबाट समेत मुक्त गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो। ‘विरामीले मैले खोजेको औषधि पाउँदिनँ, अक्सिजन पाउँदिनँ भन्ने सोच्नु नपरोस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तत्काल उपलब्धता र सुलभताका लागि तपाईंहरू सबैको सक्रियता आवश्यक छ ।’
अफवाह फैलाएर ह्यारेसमेन्ट नगरौं
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय संकटका बेला तत्काल आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा अफवाह फैलाएर जे कुरामा पनि भ्रष्टााचार नै हुन्छ भन्ने स्थायी प्रचारले काम गरिरहेकाहरूको मनोवल गिर्नेतर्फ सचेत रहन पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे।
‘भ्रष्टाचार भयो भने क्षम्य हुँदैन, तर मानव संकटलाई राजनीतिकरण गर्न स्थायी रूपमा भ्रष्टाचारको अफवाह फैलाएर महामारीसँग अग्रमोर्चामा लडिरहेकालाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने, कदनाम गर्ने र कामबाट निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मानवीय रक्षाको लागि गरेका प्रयासहरूलाई विकृत रूपमा व्याख्या गर्ने पेशा नै भएकाहरूसँग सजग रहेर महामारीबाट जनतालाई बचाउनु पर्दछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूलाई आफूले प्रयोग गर्ने टर्मिनोलोजीमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिए। ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भन्नेजस्ता टर्मिनोलोजी प्रयोग नगरौं, महामारीलाई धान्ने प्रणाली अपुग भएको हो, कोल्याप्स भएको होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीसँग यसअघि नभएका प्रणालीहरूलाई पनि हामीले यसबीचमा विस्तार गरेका छौं, त्यसैले प्रणाली कोल्याप्स भएको होइन।’
महामारीलाई राजनीति लाभको विषय नबनाऔं
विश्वव्यापी रूपमा आएको महामारी सबैको साझा समस्या भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका विरुद्ध मिलेर सामना गर्नु पर्ने बताए। उनले राजनीतिक विपक्षीहरूले सरकारले कामै गरेर भनेर महामारीबाट लाभ लिने प्रयास गरेको पनि बताए।
‘हाम्रा विपक्षीले भनेजस्तो सरकारले केही नगरेको होइन, सरकारले गरेको छ, गर्छ र गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सिमसिम पानीमा छाता ओढेर ओत लागेजस्तो आँधी आउँदा छाताले थेग्दैन। त्यस्तै भएको हो।’
छलफलमा सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट अहिले भएका कामबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो। उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालका सञ्चालक, अक्सिजन उत्पादक र वितरकहरुले आ-आफ्नो तर्फबाट महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनेबारे सुझाव दिएका थिए।
२ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार बिहानदेखि आइतबार बिहानसम्मको रिपोर्ट अनुसार वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा सो संख्यामा संक्रमितको मृत्यु भएको सम्बन्धित अस्पतालले जनाएका छन् ।
मृत्यु हुनेमध्ये नारायणी अस्पतालमा मात्रै ८ जना रहेको अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिए । यसबाहेक वीरगञ्ज हेल्थकेयर हस्पिटलमा २ जना, तराई हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, स्पर्श मल्टी स्पेस्यालिटी हस्पिटल र नेशनल मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको बाबा होटल कोरोना अस्पतालमा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये पर्साका ४, बाराका ७, रौतहटका १ र एक जना भारतीय नागरिक पनि छन् ।
मृत्यु हुनेमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२५ सिसहनिया बस्ने ३८ वर्षीया महिला छिन् । वैशाख २५ गते श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई पीसीआर परीक्षण गराउँदा उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । आइसोलेसन वार्डमा उपचारको क्रममा आइतबार बिहान ४ः१० बजे उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
बाराको सुवर्ण गाउँपालिका–२ कबहीदरबार बस्ने ६० वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । वैशाख ३० गते बिरामी भई नारायणी अस्पताल भर्ना भई सोही दिन गरिएको एन्टीजीन परीक्षणबाट उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचारको क्रममा आइतबार बिहान २ः१५ बजे उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट बाराको निजगढ नगरपालिका–७ बस्ने ४३ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । वैशाख ३० गते उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका उनको शनिबार पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । उपचारको क्रममा बेलुका ६ बजे मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–५ प्रष्टोकाका ४५ वर्षीय पुरुषलाई श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि वैशाख १९ गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । दुईदिन पछि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भईरहेकोकोमा शनिबार राति पौने ११ बजे उनको मृत्यु भएको थियो ।
नारायणी अस्पतालमा रौतहटको बंकुलका ३५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । शनिबार बिहान पौने १२ बजे उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । वैशाख ३० गते अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको सोही दिन गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
नारायणी अस्पतालमै वीरगञ्ज–१५ भिश्वा बस्ने ६२ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । वैशाख २६ गते एन्टिजीन परीक्षणका क्रममा उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उपचारको क्रममा शनिबार अपराह्न ४ बजे उनको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ ।
नारायणी अस्पतालमै पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका–६ सण्ठीका का ८६ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । वैशाख २९ गते अस्पतालमा भर्ना भएका उनमा भोलिपल्ट गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । कोभिड निमोनियाले ग्रसित उनको शनिबार बिहान २ बजे मृत्यु भएको थियो ।
वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा बारागढी नगरपालिका–२ बस्ने ४२ वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान ११ः०५ बजे मृत्यु भएको छ । वैशाख २९ गते विरामी भई उपचारका लागि नारायणी अस्पतालमा लगिएको थियो । सोहीदिन एन्टीजीन परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–५ बेलहिया प्रष्टोका बस्ने २५ वर्षीय पुरुषलाई श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि वैशाख २६ गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । वैशाख २९ गते पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब नमुना पठाइएको थियो । भोलिपल्ट पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार चलिरहेको थियो । उपचारको क्रममा शनिबार बिहान ६ः१० बजे उनको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–४ बस्ने ६५ वर्षीय पुरुषलाई पनि बैशाख १५ गते श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । उपचारका लागि नेशनल मेडिकल कलेजमा लगियो । दुई दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । नेशनलले बाबा होटलमा सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालको वार्डमा उपचारको क्रममा आईतबार बिहान साढे १२ बजे उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ ।
बाराको जीतपुरसिमरा स्थित डाबर नेपाल कम्पनीमा कार्यरत ४३ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । ज्वरो तथा श्वाोसप्रश्वासमा समस्य आई बैशाख १९ गते उनलाई वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पीटलमा भर्ना गरिएको थियो । बैशाख २३ गते पीसीआर परीक्षणका लागि संकलन गरिएको स्वाब नमुनाको रिपोर्ट दुई दिन पछि आउँदा पोजेटिभ आएको थियो । उपचार कै क्रममा शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जानकारी दिएको छ ।
वीरगञ्ज हेल्थ केयरमै पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–२ की ६५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । बैशाख २६ गते पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई वैशाख २७ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । शनिबार बिहान ८ बजे उपचार कै क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
बाराको परवानीपुर गाउँपालिका– १ बस्ने ५६ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । वैशाख २७ गते श्वासप्रश्वास तथा ज्वरोको समस्या र पीसीआर पोजेटिभ रिपोर्ट सहित स्पर्स मल्टी स्पेस्यालिष्ट हस्पिटलमा भर्ना भएका थिए । आइसोलेसन वार्डमा उपचारको क्रममा शनिबार बिहान १० बजे उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
पोखरा । देशमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को दोश्रो चहर फैलिरहेको छ । देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कसैले बाहिर निस्कन दिएपनि निस्कन नुहेन स्थिति छ, किनकी हामी आफै कोरोनाका भएको ठाउँमा पुग्यौँ भने मात्रै कोरोना सर्ने हो, आफै आउने होइन त्यसैले घर भित्रै बस्नु परेको छ ।
सरकारले पनि त्यसै भनेको छ, तर घरभित्र बसीरहँदा वा निषेधाज्ञाका बेलामा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएको हामीले सुन्दै आएका छौँ । त्यसैले आज हामीले यहाँहरुलाई गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेको मानसिक स्वास्थ्यको स्याहार सम्बन्धी महत्पवुर्ण जानकारी दिदै छौँ, हेर्नुहोस ।
दैनिक कार्यतालिका बनाएर आफ्नो दिनचर्यालाई व्यस्त तथा सक्रिय राखौँ
घरायसी काम तथा पारिवारिक छलफलमा सहभागि होऔँ ।
आफ्नो रुचिका खेल खेलौँ, किताब पढ्ने, लेख्ने, रचनात्मक चलचित्र हेर्ने गरौँ ।
तनाव व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परे मनोचिकित्सक वा मनोविद्संग परामर्श गर्न १०९२ मा सम्पर्क गरौँ ।
पर्याप्त मात्रामा सुत्ने गर्नुहोस ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग घटाऔँ र अधिक समाचार नहेरौँ ।
टाढा भएपनि आफन्त र साथीभाईसंग नियमित सम्पर्कमा रहौँ ।
नियमित रुपमा शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यान गरौँ ।
सजिलोसंग पच्ने र पोषणयुक्त खानेकुरा खाऔँ ।
आफुले पनि लागु गरौँ र अरुलाई पनि यसै गर्न भनाैँ, कोरोना सम्बन्धी भयभित पार्ने समाचार भन्दा यस्ता जानकारी मुलक समाचार र सामाग्री आफ्नो फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरौँ । –सम्पादक । #सेयर_गर्नुस_है_कसैलाइ_आवस्यक_परिरहेको_हुनसक्छ……
मानसिक स्वास्थ्यको स्याहार
पोखरा, ३० बैशाख । गएको २४ घण्टामा गण्डकी प्रदेशमा थप ५ सय ६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
यो संगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २५ हजार ९ सय ५३ पुगेको छ । गएको २४ घण्टामा गण्डकी प्रदेशमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संगै गण्डकी प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय १८ पुगेको छ ।
गएको २४ घण्टामा म्याग्दीमा , पर्बतमा ११, गोरखा २ लमजुङ २ तनहुँ २७, कास्की २१०, बागलुङ ११९, स्याङजा १६ र नवलपरासी पुर्व ९१ जना रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ । गएको २४ घण्टामा म्याग्दीमा १, कास्कीमा ९ र बागलुङमा ४ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ४५ जना निको भएका छन् भने प्रदेशमा अहिलेसम्म कुल १८६०४ जना संक्रमण मुक्त भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ७ हजार ३१ जना रहेका छन् । यो प्रदेशमा ६ हजार ८ सय ६८ जना होम आइसोलेसनमा रहेको गण्डकी प्रेदश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
३० बैशाख काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द हुने भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका अनुसार कोरोनाको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले निषेधाज्ञाको अवधिभर त्यस्ता कार्यालय बन्द रहने जनाइएको छ। प्रशासनले सूचना जारी गरी कोरोनाको महामारी तिब्र रुपमा बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि उक्त निर्णय गएिको जनाएको छ।
“निषेधाज्ञाको अवधिभर अत्यावश्यक सेवाको कार्यालय बाहेक अन्य सबै जिल्लास्थित कार्यालय यही वैशाख ३० गतेदेखि बन्द गर्ने-गराउने व्यवस्थाका लागि जानकारी गराइन्छ”, जारी सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनामा अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहमा कुनै व्यवधान आउन नदिइ न्यूनतम जनशक्तिमा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। यसैबीच उपत्यकामा आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी आगामी जेठ १३ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। बुधबार राति १२ बजेदेखि तोकिएको निषेधाज्ञाको समयावधि सकिन लागेकाले रातिदेखिनै लागू हुनेगरी थप दुई हप्ता उक्त आदेश जारी गरिएको हो।
उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बुधबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाको आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि वैशाख २२ गते पुनः एक साता थप गर्दै आज राति १२ बजेसम्मका लागि समय थपिएको थियो। सङ्क्रमण दर नघटेपछि पुनः दुई साता थप गरिएको हो।
आजदेखिको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान १० बजेसम्म खुला रहने भएको छ। उक्त समयमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्टल स्टोर्स (खाद्य सामग्री मात्र बिक्री गर्न) खुला हुने छ। मानिसका भिडभाड हुने सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको छ।
सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यवस्तु, तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक एवम् निजी सवारी साधन जेठ १३ गते राति १२ बजेसम्म उपत्यकामा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा (बढीमा २ जना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छ।
२०७८ वैशाख ३० बिहिवार, द्वितीया – 13 May 2021
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। दिउँसोदेखि साथीभाइसँग केही सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या पर्न सक्छ। शुभचिन्तकहरूकाे सहयाेगले काम बन्नेछ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – परिस्थितिले नयाँ मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ। विविन्न भौतिक सुविधाका वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ। दिगो काम प्रारम्भ हुनाले आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै अनुभवलाई पनि निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिउँसोदेखि पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला। समयमा सहयाेगी नहुँदा दुःख पाइनेछ। बाध्यताले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै कीर्तिमानी कामको यश लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। समय फुर्सदिलो देखिए पनि रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। पारिवारिक जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। अपराह्नतिर आयस्रोत पनि सबल बन्ने देखिन्छ। सानो प्रयत्नले दिगो काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – सुरुमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। अरूको विश्वासमा पर्दा धोका हुन सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्राको सम्भावना देखिन्छ। दिउँसोदेखि परिस्थिति अनुकूल बन्नाले महत्त्वाकांक्षी काम गर्न सफल भइनेछ। तारिफयोग्य कामले प्रशंसक बढ्नेछन्। ज्ञान, कला र व्यक्तित्व निखार्ने समय छ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। प्रयत्न गर्दा दिगो काम प्रारम्भ हुन सक्छ। स्रोत–साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। तर खर्च बढ्नाले अर्थ संग्रहमा बाधा पुग्नेछ। सरसापट र भैपरी आउने कामले रकम बाहिरिन सक्छ। मध्याह्नपछि बसाइको स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा हुने सम्भावना देखिन्छ। परिस्थितिजन्य समस्याले अलि दु:ख पाइनेछ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – कीर्तिमानी कामको यश लिँदै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नाले मनग्य फाइदा हुनेछ। कर्मयोगले आम्दानी समेत बढाउनेछ। दिउँसोदेखि विभिन्न स्रोतबाट रकम हातलागी हुनेछ। आँटले काम बन्नेछ भने मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। व्यापार बढ्नेछ र अड्किएको रकम पनि उठ्नेछ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – चिताएको काम बिग्रनाले दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। शारीरिक कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ। बाध्यताले अलमल्याउन सक्छ। अरूका लागि समय, धन र बुद्धि खर्चनुपर्ला। आध्यात्मिक चेतनाले धर्मकर्म र सेवामा प्रवृत्त गराउनेछ। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। मिहिनेतले कीर्तिमानी काम बन्नेछ। तर स्वयं पछि सर्दा आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउनेछन्।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काम पूरा गर्न केही बढी समय लाग्नेछ। जिम्मेवारी बढे पनि न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। पहिलेका चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अवसर तथा सफलताले पछ्याउनेछन्। मिहिनेत परे पनि भाग्यले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – सुरुमा रमाइलो यात्रा र मनोरञ्जनको आनन्द लिने समय छ। आतिथ्य खर्चिलो देखिए पनि सत्कार पाइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। विभिन्न भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ। दिउँसोदेखि आफन्त टाढिनेछन्। सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा कमजोरी देखापर्न सक्छ। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – रोकिएका काम बन्नाले मनग्य लाभ हुनेछ। द्वेष वा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ हुनेछ। दिउँसोदेखि बिछोडिएका आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई सहज बनाउन सकिनेछ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – अस्वस्थताले कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। पढाइलेखाइमा त्यति समय दिन नसकिएला। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। परिस्थितिवश काम गर्न विलम्ब हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला। दिउँसाेदेखि प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। अरूको चासो लिँदा व्यर्थै झमेला बढ्न सक्छ। उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – हतारमा निर्णय लिँदा काम बिग्रन सक्छ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई समस्या पर्नेछ। बेसुरमा बोल्ने बानीले पनि दु:ख पाइनेछ। अरूलाई दिएको वचन पूरा गर्न नसकिए पनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। दिउँसोदेखि बौद्धिक कलाको प्रभाव बढ्नेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। पहिलेको दुविधाले निर्णायक मोड लिनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्।
२०७८ वैशाख २९ बुधवार, प्रतिपदा – ललितपुर मत्स्यन्द्रनाथ रथारोहण, विश्व नर्स दिवस – 12 May 2021
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – आश्वासन दिनेहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगर्न सक्छन्। हल्लाको भरमा अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। आफन्त र परिवारजनलाई समय दिनुपर्ने हुन सक्छ। कृषि, पशुपालन तथा घरेलु कामकाजमा बढी प्रवृत्त भइनेछ। बगैंचा, फूलबारी र घरको साजसज्जामा समय बित्नेछ। टाढिएका आफन्त, साथीभाइ नजिकिन सक्छन्। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मफल हातपार्न सफल भइनेछ। अरूको विश्वास जित्न केही समय लाग्नेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। मिहिनेतले राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नेछन्। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीबाट जाेगिएर काम गर्नुहाेला।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – अध्ययनमा विशेष प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको तारिफ हुनेछ। बोलीको प्रभावले आर्थिक क्रियाकलापमा समेत फाइदा हुनेछ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। बौद्धिक क्षमताको तारिफ हुनेछ भने व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – खर्च लागे पनि काम बन्नेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा अवरोध हट्न सक्छ। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। भेटघाटका लागि समय अनुकूल नदेखिए पनि टाढाका साथीभाइले काममा साथ दिनेछन्। केही खर्च बढ्नेछ। समयमा आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ। लगानी बढाउने अवसर भने प्राप्त हुनेछ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – कर्मयोगको विशेष फल प्राप्त गर्ने समय छ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आयआर्जन बढ्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। ऋण तथा कर्जा पनि चुक्ता गर्न सकिनेछ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – विशेष कर्म प्राप्तिको योग छ। तर अवसर र चुनौती एकसाथ देखा पर्ने हुँदा होसियारीसाथ काममा जुट्नुपर्ला। सामाजिक जिम्मेवारी बढ्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुट्नेछ। आँटेको काम सिद्ध गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ। सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुने सम्भावना छ। व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – सम्भावना र अवसर खोजी गर्ने समय छ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। दिगो फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। सानो प्रयत्नले समाजका लागि फाइदा हुने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। तारिफयोग्य कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ भने केही प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्नुपर्नेछ। अशक्त अवस्थामा व्यस्तता बढ्नेछ। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। हुलमुलमा धनमाल हराउन सक्छ। प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउन नसकिएला। सम्भावना देखिए पनि सोचेको उपलब्धि प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ। शुभचिन्तकहरूकाे सहयाेगले काम बन्नेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ। परिवारजनको साथ जुट्नाले अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई सहज बनाउन सकिनेछ। भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ। तर विवादास्पद निर्णयले समस्या निम्त्याउन सक्छ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ। प्रतिपक्षीहरू समेत परिस्थितिले सहयोगी बन्नेछन्। प्रयत्न गर्दा विश्वास नलागेको काम समेत बन्न सक्छ। चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। पहिले दुश्मनी गर्नेहरूले भने केही समस्या निम्त्याउन सक्छन्, सजग रहनुहाेला।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – श्रम परे पनि सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत पनि बढ्नेछन् र दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई पनि निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको प्रभाव बढ्नेछ।
एनसेलको हरेक दिन स्मार्टफोन जित्न सकिने योजना
२८ बैशाख काठमाडौं : एनसेलका ग्राहकले अब युनाइटेड अरब एमिरेट्स (युएई)बाट आउने कलमा हरेक दिन स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनेछन्। यो योजना वैशाख २८ देखि लागु हुने एनसेलले घोषणा गरेको छ।
इदको अवसरमा ल्याइएको यो योजना सात दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।यस योजना अन्तर्गत युएईबाट धेरैभन्दा धेरै आगमन कलमा कुरा गर्ने ग्राहकले हरेक दिन सामसुङ ग्यालेक्सी–ए २० स्मार्टफोन जित्न सक्नेछन्।
युएईमा रहेका ‘डू’ मोबाइल सेवा प्रदायकको सिम कार्ड प्रयोगकर्ताका नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा साथीभाइले यो आकर्षक योजनाको लाभ लिनका साथै स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनेछन्।
विषम परिस्थितिमा यो योजनाले एनसेलको नेटवर्कमार्फत सञ्चार सेवामा खर्च नगरी विदेशमा रहेका परिवारका सदस्य तथा साथीभाइसँग सम्पर्कमा रही रहन मद्दत गर्ने कम्पनीको विश्वास छ।
सात दिनमा सात जना ग्राहकले स्मार्टफोन जित्नेछन्। ग्राहकले उठाएको आगमन कुल संख्या, औसत कल समय र कुल कुराकानी गरेको मिनेटको आधारमा स्मार्टफोन विजयी ग्राहकको नाम घोषणा गरिनेछ। विजयी ग्राहकलाई एनसेलको कर्पोरेट कार्यलयबाट ग्राहकको सुविधा अनुसार स्मार्टफोन हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ।
स्मार्टफोन जित्ने मौकाको साथ साथै एनसेलका ग्राहकले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा कुरा गर्दा ग्राहकले २० रूपैयाँसम्म बोनस पनि प्राप्त गर्नेछन्। यो सेवा १७१२६ डायल गरी निःशुल्क सुरु गर्न सक्छने छन्।
विदेशबाट आफ्ना आफन्त, साथीभाइ र परिवारजनले गरेको कलमा कुरा गर्दा पहिलो दुई मिनेटपछि हरेक मिनेटे बोनस पाउँछन्। यसरी प्राप्त बोनस तीन दिनका लागि मान्य हुनेछ। ग्राहकले उक्त बोनस एनसेलको नेटवर्क भित्र कुरा गर्न, एसएमएस पठाउन र इन्टरनेट चलाउन समेत प्रयोग गर्न सक्छन्।
पर्वतमा आज रातिदेखि १० दिन निषेधाज्ञा
२८ बैशाख पर्वत : कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा नै फैलिएपछि पर्वतमा आजदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। मंगलबार राति १२ बजेदेखि जेठ ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यसअघि जिल्ला सदरमुकाम रहेको कुस्मा नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा मात्र लागु गरिएको थियो।
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत संक्रमितहरू भेटिँदै गएको र सवारी साधनहरू विभिन्न बहानामा ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम आउजाउ गर्दा जोखिम उच्च बन्दै गएकले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन र हिँड्डुल गर्न रोक लगाइएको उल्लेख छ। यस्तैm., मठमन्दिर तथा धार्मिक स्थल बन्द रहनेछन्। विवाह र मृत्यु संस्कारमा १० जना मात्रै सहभागी हुन पाइने जनाइएको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेकका पसल बन्द गर्ने, सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित भएर सेवा प्रवाह गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चलाउने रोक लगाउने, विकास निर्माणका काम नरोक्ने तर कार्यस्थलमै मजदुरलाई खाने, बस्ने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त, सहकारी तथा बिमा कम्पनी बन्द गर्ने लगायत निर्णय भएका छन्।
औषधि तथा स्वास्थ्यका सामग्री पसल २४सै घण्टा खुला राख्न दिने, एम्बुलेन्स, शव वाहन, दमकल, खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री, दुध, पानी, पेट्रोल आदि बोकेका सवारीसाधनसहित सञ्चारकर्मी, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालनमा रोक नलगाउने प्रशासनले बताएको छ। विवाहका लागि चलेका सवारीमा दुलाहा–दुलहीसहित बढीमा पाँचजना भन्दा बढी सवार भएमा त्यस्ता सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रशासनले बताएको छ।
खाद्यान्न पसल बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।